DLULA I-Lockheed P-3C Orion FSX & P3D - Rikoooo
I-Lockheed P-3C Orion FSX & P3D Inguqulo 3.31
Usayizi 83.3 MB
Play 33 801
Kubuyekeziwe on 01 / 12 / 2018 : Manje iyahambisana Prepar3D i-v4 +, i-Auto-ukufaka inguqulo 10.5.
Kubuyekeziwe on 05 / 07 / 2016 : Inguqulo entsha ye-3.31 iyahambisana ne-DirectX10 nokuningi, i-Auto-installer version 10.
Chofoza lapha ukuze uthole FS2004 vesion ehambisanayo kuphela.
Siyajabula ukwethula P-3C Orion, edume izindiza zempi, abalingisa yithimba FS KBT. I Lockheed P-3 Orion kuyinto eligudle ugu patrol izindiza ezisebenza-helices ezine emhlabeni. I P-3 Orion kuyinto esuselwe wezempi izindiza civil Lockheed L-188 Electra yasala dengwane project. (Umthombo: wikipedia)
Ingaphandle kanye Umdwebo lwalolu hlobo sidaliwe ngokuningiliziwe kuka (V29) ngomsebenzi odlulileko. Ikakhulukazi, i-main wing maqondana (ichopho futhi injini Nasser, njll) iyona imiklamo emisha. izinhlobo eziningana P-3C Ayekulungele like wakubonakalisa P-3C ukuthi kwakuphakathi soguquko manje. Kuyinto eziyisishiyagalolunye izinhlobo esewonke.
Superb add-on nge 3D full virtual abanikeze asebenza nabo kanye kuwumkhuba umsindo. Modeling high, bethola indlela yokwenza eziningi like Navy kanye Canadian Air Force. I model yokundiza impela enengqondo. Ngaphezu kwalokho, lo indiza ligcwele lezimanga, ezifana amabhomu bephonsa kanye neminye imisebenzi ekhethekile. It has konke a payware, kodwa kungcono freeware.